प्रियंकाको खुम्च्याई कुन हद सम्म ? – Mero Film
प्रियंकाको खुम्च्याई कुन हद सम्म ?
कुनै एक समयमा प्रियंका कार्कीले पाए जति सबै फिल्ममा काम गरिन् । मुख्य भूमिका रहेको फिल्म सफल नभएका कारण उनलाई निर्माता निर्देशकले लिड रोलमा लिन हच्किए । अहिले त उनी केमियो देखि आइटम डान्स सम्म गर्दै बसेकी छन् ।
समय बदलिदै छ । आफ्नै फाउन्डेसन खोलिन सामाजिक काम पनि गर्दै छिन् हुने वाला श्रीमान संग मिलेर । यहि क्रममा आफ्नै ब्यानरबाट फिल्म बनाउने भनेर प्रोडक्सन हाउस पनि दर्ता गराईन् । र अहिले युट्युव च्यानल खोलेकी छन् ।
सोहि च्यानल मार्फत उनले समलिंगी महिलाको कथा बोकेको सिरिज लिएर आएकि छन् । अभिनयमा साथ दिएकी छन्, श्रीस्टि श्रेष्ठले । उनलाई सजिलो के छ भने हुनेवाला पति आफैले पनि क्यामेरा चलाउछन् ।
अन्य नायिकाको काम गर्ने वातावरण तन्किदै गर्दा उनी भने खुम्चिदै गएको देखिन्छ । एक समय उनी फिल्ममा भन्दा युटुव अन्तर्वार्तामा रमाएकी थिइन् । भ्युज पनि राम्रो गएको थियो । के यहि भ्युजको लोभले गर्दा त उनी यता तानिएकी होइनन् ?
तर खुम्चिदै जादा इन्डस्ट्री भन्दा टाढा कहिँ कतै कुनामा बसेर टुलुटुलु हेर्ने दिन त आउदैन नी ?
२०७६ साउन ५ गते १४:११ मा प्रकाशित
के भन्न खोज्दै छिन्, प्रियंका ?
रीचाको विवाह आज ?
चाम्स न यता न उता